नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको शेयरमा लगानीकर्ताहरु किन बढीरहेको छन् त ? – Insurance Khabar
नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको शेयरमा लगानीकर्ताहरु किन बढीरहेको छन् त ?
प्रकाशित मिति : २६ फाल्गुन २०७५, आईतवार ११:५४
नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले केही बर्षयर्ता देखि लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षक रुपमा लाभांस वितरण गर्दै आईरहेको छ । शेयर बजारमा हरीयाली आउने क्रम भने घट्दो नै रहेको छ ।शेयर बजारमा हरीयाली आउने क्रम घटेपनि नेपाल लाईफको शेयरमा भने लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढ्दो नै देखिरहेको छ ।
कम्पनीले विगतका दिनमा पनि लगानीकर्ताहरुलाई राम्रो लाभांस वितरण गरेको कारणले गर्दा कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढदो नै देखिएको छ ।
गत साताको अन्तयमा सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको १ करोड ९९ लाख बराबरको शेयर किनबेच भएको थियो । कम्पनी प्रति लगानीकर्ताको विश्वास निकै राम्रो रुपमा रहेको यसबाट पनि सपष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।
बीमा कम्पनीहरुमा पछिल्लो समय साधारणसभा समयमा नै नहुने भएको कारणले गर्दा लगानीकर्ताहरु यस प्रति त्यक्ति रुची नराखेको बेलामा नेपाल लाईफको शेयर किन्ने लगानीकर्ताको उपस्थिति राम्रो नै रहेको पाईन्छ ।कम्पनीले विगत ५ बर्षयता देखि लगानीकर्ताहरुलाई राम्रो लाभांस वितरण गरिररहेको देखिन्छ ।
इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट २५ प्रतिशत बोनस र २३.५० प्रतिशत नगद सहित ४८.५० प्रतिशत लाभांश घोषणापछि नेपाल लाइफको शेयर मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । कम्पनीले फागुन १९ गते (आईतबार ) देखि लाभांश घोषणा गरेको थियो ।
कम्पनीको १ हजार ५० रुपैयाँमा खुलेको बजारमा कम्पनीको शेयरमूल्य निरन्तर बढेर १ हजार ११० रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
सुनको मुल्य बढ्यो चाँदीको घट्यो